ဘီလ်ဂိတ်က COVID-19 မူလဇစ်မြစ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိကထက်သာမညဖြစ်နေဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီ သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်အား ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် သီးသန့်အင်တာဗျူးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဩဂုတ် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Microsoft မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်က အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူလဇစ်မြစ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုသည် လူသားများ၏ အသက်ကိုကယ်တင်ရန် တစ်ခုတည်း အရေးပါသော လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု The Australian သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူလဇစ်မြစ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိပ္ပံပညာရှင်များအကြား အငြင်းပွားမှု မြင့်တက်လာနေကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံများအကြား တင်းမာမှုကို လောင်စာထည့်ပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းစုံစမ်းမှုက “ နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်း နှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း လိုအပ်ချက်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်”ကြောင်း ရုပ်သံချန်နယ်တစ်ခုနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဘီလ်ဂိတ် ၏ ပြောကြားချက်ကို The Australian နေ့စဉ်သတင်စားက သောကြာနေ့တွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘေလ်ဂိတ်က “ ဒီအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက လူသားတွေရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော အရေးပါသာတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုတော့ မရှိပါဘူး ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Bill Gates plays down relevance of COVID-19 origin investigation: media
BEIJING, Aug. 8 (Xinhua) — Microsoft founder Bill Gates said the controversial coronavirus origin investigation is not directly tied to particular actions to save lives, according toareport by The Australian.
Investigations into the origins of SARS-CoV-2, which have become highly controversial among scientists and fuelled tension between China and the United States and Australia, would not change “the need for masks and vaccines,” the report published on the daily newspaper on Friday cited Gates as saying inaTV interview on Wednesday.
Gates said that “we should investigate these things, but it’s not directly tied to particular actions to save lives.”Photo- Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, receives an exclusive interview with Xinhua in Seattle, the United States, on Nov. 13, 2019. (Xinhua/Qin Lang)
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ တစ်ရက်တည်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ် ၊ လူနာသစ် ၁၈,၆၈၈ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် ရှန်ဟိုင်းမြို့သို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၃၈,၀၀၀ ကျော်သွားရောက်
ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ မြို့လုံးကျွတ် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်